तपाईंलाई थाहा छ ? दशैंको मनोवैज्ञानिक महत्वले तपाईंलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? | Hamro Doctor News
तपाईंलाई थाहा छ ? दशैंको मनोवैज्ञानिक महत्वले तपाईंलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
हिन्दूहरूको महान पर्व बडादशैं यति बेला तपाईं हाम्रो घर आँगनमा छ । आज दशैंको महानवमी मा दुर्गाको नवौं स्वरुपको पूजापाठ गरि मनाइँदैछ । दशैं जस्ता चाडको सांस्कृतिक मात्रै होइन मनोवैज्ञानिक महत्व पनि हुन्छ । जसले मानव स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छ ।
दशैँको धार्मिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि ठुलो महत्व रहेको छ । हुन त हाम्रा सबै चाडपर्वहरू कही न कही धर्मसँग जोडिएर आउने गर्दछन् । तर दशैँजस्ता महत्वका चाडपर्वलाई धर्मसँग मात्र सम्बन्धित नबनाएर परम्परा र संस्कृतिका रूपमा विकसित गरिंदै लैजानु पर्दछ । यसलाई सबै नेपालीहरूले महत्वका साथ मनाउनुपर्छ । दशैँतिहार जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वहरूले राष्ट्रिय एकता, शान्ति र सद्भाव कायम राख्न मद्दत समेत गरिरहेको हुन्छ साथै नेपाली हुनुको पहिचान र गौरव महसुस गराउँछ ।
दशैँमा दक्षिणा दिनु आफैमा नराम्रो होइन । चाडपर्वको बेला किनमेल लगायतमा धेरै पैसा खर्च हुने, ऋण समेत लाग्ने हुँदा सक्नेले गच्छे अनुसार आफूभन्दा सानालाई टिका लगाएर पैसा दिंदा यसले थोरबहुत ऋणबाट मुक्त हुन र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
दशैंमा विशेष रूपमा शक्तिपिठहरूमा दुर्गा भवानीको पूजा हुन्छ । दुर्गा माता अर्थात् महिला वा स्त्रीलाई शक्तिको रूपमा पुजा गर्नु, शक्तिको प्रतीकको रूपमा लिनु हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाज जहाँ महिलालाई कमजोर ठानिन्छ । यस्तो समाजमा यसले ठुलो महत्व र अर्थ राख्दछ ।
Last modified on 2019-10-08 08:43:58